7 आईटी कौशल ढाँचाहरू सम्पादन गर्न चरणहरू हेर्नुहोस्
7 अप्रिल 2017
7 आईटी कौशल ढाँचाहरू लागू गर्न चरणहरू
नयाँ #IT कौशल उदाहरण को लागि, प्रोग्रामिंग संसाधन प्रशासन, प्रशासन, लाभ स्तर प्रशासन, र यस अगाडी नवाचार को विकास को गोद लेने को लागी निपटने को लागी आवश्यक हो। प्रश्न हो, "के हो म तपाईंकोटी प्रतिनिधियों को पर्याप्त रूप देखि तैयार र पर्याप्त कुशल व्यवस्थित गर्न को लागी गोद लेने, कार्यान्वयन, खपत, र बढती नवाचार को प्रशासन को बल दिनुहोस? "
आईटी कौशल संरचना पठाउँदै तथ्य मन पराउँछन् कि यो जिम्मेवारी, व्यवस्थित र सम्पत्ति लिनुको बावजुद मन-बोगग्लिन कार्य होइन। अन्तमा, यसले व्यापारको लागि सामान्य फिर्तीमा लगानी (ROI) योगदान गर्नेछ। तपाईं यस बारे मा सोच्न अपरिचित अप्रयुक्त नवाचार संग सम्बन्धित को लागी जस्तै हुन सक्छ। अप्रचलित नवाचार अन्ततः विस्तारित हुन्छ स्वामित्वको कुल लागत (TCO), सम्भवतः उच्च परिचालन प्रयोगहरू (OPEX) र घट्यो नेट वर्तमान सम्मान (एनपीवी)।
आईटी सर्टिफिकेट ढाँचाहरू पठाउन आईटी संस्थाहरूसँग काम गर्न मेरो संलग्नताबारे सोच्न पछि, मैले यो प्रक्रिया सात प्रमुख स्ट्रिमहरूमा वा सम्भावित चरणहरूमा समावेश गरेको छु। स्मरण गर्न आवश्यक चीज यो एक उदार प्रक्रिया हो, जुन लागू गर्दछ यो कार्य सातौं चरणमा समाप्त हुँदैन। एक संगठन भित्र निरन्तर परिवर्तन अपरिहार्य छ। यस तरिकामा, संगठन धेरै समयको पुनरुत्थान हुनुपर्छ कि यो आईटी कौशल सेट कसरी व्यवसायको महत्त्वपूर्ण दिशामा समायोजित रहन्छ। सात चरणहरु मध्ये प्रत्येक को तल को बारे मा अधिक उल्लेखनीय विवरण को बारे मा कुरा गरेको छ।
चरण 1: संगठनको महत्त्वपूर्ण दिशा निर्धारण गर्नुहोस्।
चरण 2: सही कुशलताको महत्व बुझ्नुहोस्।
चरण 3: कुन कुशलता आवश्यक छ विशेषता को लागी समर्पण गर्नुहोस्।
चरण 4: आवाश्यक आवश्यकताहरु पहिचान गर्नुहोस्।
चरण 5: कौशल तयारीको आकलन गर्नुहोस्।
चरण 6: पुल कौशल रचनाहरू।
चरण 7: आवश्यक कौशलहरू राख्नुहोस्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संगठनको प्रमुख दिशा निर्णय गर्ने व्यवसाय परिवर्तनको केन्द्रान्तरण हो। भविष्यको अवस्था कस्तो छ? व्यवसाय जस्तो छ? यो आईटी कौशलहरू व्यवसायलाई आफ्नो भविष्यको राज्यलाई पूरा गर्न मद्दत चाहिन्छ? व्यापार साझेदारहरू आईटी संगठनबाट आउँदैछन्? यो संगठनहरूमा सामान्य विशेषता इकाइहरूको दृष्टिकोण र अपेक्षाहरूको लागि आईटी संगठनको साथमा गलत दिशामा रहेको छ। प्रारम्भिक चरण व्यापारको मुख्य दिशाको बारे सफाता उठाएको छ।
सही कुशलताको महत्त्व व्यवसाय, सहायक सहयोगीहरू र आईटी संगठनलाई सशक्तिकरण गर्न व्यवसायको महत्त्वपूर्ण दिशा बलियो बनाउन आरआईआई ड्राइभिङ्ग गरीर्फत स्वीकार गरिन्छ। आदर्श समयको सही समय लिएर आईटी संगठनले गठित गर्न, व्यापारिक परिवर्तनको लागि अभिनय क्षमताहरू राख्न र राख्न सेट गर्दछ। सही कुञ्जीहरू गर्दै आईटी योग्यता भन्दा अन्य कुराको बारेमा हो। IT कौशल ढाँचाहरू पठाउँदै आईटी प्रोफेसरहरूलाई विशेष एकाइहरूसँग अधिक लगातार कुराकानी गर्न आवश्यक छ, व्यवसायका उद्देश्यहरू र प्रविधि बुझ्नुहोस् र उनीहरूको क्लाइन्ट आधार र अपेक्षाहरू थाहा पाउनुहोस्। नाजुक कौशल, उदाहरणका लागि, संचार, वार्तालाप, पार्टनर प्रशासन, प्रशासन विस्तार गर्नुहोस्, र ग्राहक सम्बन्ध प्रशासन, उल्लेखनीय प्रगतिशील अनिवार्य रूपमा बिस्तृत गर्दैछन्।
पठाउँदै IT कौशल ढाँचाहरू, यस्तो रूपमा समर्पण गर्न को लागी संगठन को सबै स्तरहरु मा सरकारी प्रायोजन र व्यक्ति को सबै समावेशी समुदाय को कारण चैंपियन देखि कार्रवाई को आवश्यकता मा कार्रवाई को आवश्यकता हुनेछ। याद गर्न आवश्यक कुरा भनेको पठाउनु हो आईटी संरचना संरचना एक संगठनात्मक र व्यावसायिक सुधार आंदोलन हो र कार्यान्वयन प्रशासन कार्य होइन। निष्कर्षमा छ कि प्रक्रियामा आवश्यक व्यक्तिलाई कमले कम पार्छ, त्यसपछि तिनीहरू यसको समृद्धिको ग्यारेन्टीमा ध्यान केन्द्रित रहन असन्तुष्ट हुन्छन्। के गरिरहेको छ के बारे सीधावर्तीता आईटी कौशल ढाँचाहरू सुचारु गर्न प्रमुख उपलब्धि चरहरू मध्ये एक हो। आईटी कौशल ढाँचाहरू सुचारु गर्न तिनीहरूका धक्काहरूमा संगठित रूपमा नियमित रूपमा संगठित हुन्छन् किनभने उनीहरूले हरेक अनौपचारिक कार्यको रूपमा उत्प्रेरित गर्ने प्रयास गर्छन् किनभने उनीहरूले हरेक दिन व्यायाममा समन्वय गर्ने विरोध गरे। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि चर एक व्यक्ति को आईटी प्रणाली पठाउन को लागि आफ्नो सामान्य समय को विशिष्ट दर दिदै छ।
यो प्रगतिले विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रहरूमा क्रान्तिकारी संगठन भित्र आवश्यक रोजगारीका भागहरूमा एक कमाना लिन आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण कुञ्जीहरू पहिचान गर्नाले संगठनलाई हालको राज्यको मूल्यांकन गर्न र यसको भविष्य अवस्था स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। हामी पूर्ण रूपमा जान्दछौं विशिष्ट व्यवसायका भागहरू धेरै आवश्यक कुकुरहरू छन् तथ्यको बावजुद यो प्रगतिमा यो आवश्यक छ कि तीनवटा चार केन्द्रिय कौशलमा ध्यान केन्द्रित गर्न। यो प्रगति व्यवसाय भागहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जुन जिम्मेवारहरूको सेटको रूपमा एकदम नै होइन। संस्थाहरू नियमित रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा फिसलिएको बेला तिनीहरू अवस्थित रोजगारीका भागहरूमा ध्यान दिन्छन् र यी व्यवसायका भागहरू भित्रका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गर्छन्। भविष्यको राज्यको कामका भागहरू र कौशलहरू बिभाजन गर्न यी रोजगारीका भागहरूमा वर्तमान जनसंख्याबाट छुट्याइएको हुनुपर्छ। कामका भागहरू विशेषता हुन सक्छ जुन मानिसहरु एक स्तरको साथ सुरू गर्न अर्को, वा पनि साथमा, कार्यात्मक दायरामा क्रमांक दायराहरू मार्फत एक अनमहात्मक र गतिशील तरिका प्रदान गर्दछ।
एकपटक भविष्यको राज्यका कामका अंशहरू विशेषताको रूपमा, निम्न चरण संगठनमा पर्याप्त संख्याको उपलब्धिहरूको सर्वेक्षण गर्न हो। दिमागमा राख्नुहोस्: यो एक व्यावसायिक विकास अभियान हो, कार्यान्वयन प्रशासन कार्य होइन। यसले मानिसहरुलाई आफ्नो कौशल रचनाहरू भेद गर्दछ र पेशेवर सुधार खुल्लाको लागि चरण सेट गर्दछ। एक सम्भावना कौशल मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर मा मान्यता प्राप्त कौशल छेद, सामान्य कार्यात्मक क्षेत्र को अंदर र पूरी आईटी संगठन को माध्यम ले आखिर मा शामिल गर्न को लागी चाहिए।
अब मानिसहरूले सुधार र योजना तयार गर्न सक्छन् जुन आवश्यक आवश्यक कुञ्जीका लागि समायोजित हुन्छन्। विद्यमान कुशलताको बारेमा जानकारी दिईएको संस्थाले संस्थालाई सर्वोत्तम पहिचान गर्न सहयोग पु ¥ याउँछ जहाँ सुधार र तयारी गर्ने अभ्यास विकासको लागि विस्तार र खर्च योजना तैयार गर्न को लागी अर्थव्यवस्थाको विस्तार गर्न व्यस्त हुनु पर्छ। अवस्थाहरूमा जहाँ कुशलता आवश्यक छ, यसले संगठनलाई सहयोग गर्दछ कि छनौट गर्ने वा सम्झौता गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा ती नयाँ कौशलताहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। कौशल.
यो कौशल को छेद को सीमित गर्न को लागि यो प्रक्रियात्मक प्रक्रिया को शुरुवात हो। मानिसहरु लाई प्रगति र तयारी को अभ्यास को माध्यम ले नयाँ कौशल प्राप्त को रूप मा, उनि आफैलाई पुन: आश्वस्त गर्न सक्छन्। व्यापार परिवर्तनले संस्थाहरूको लागि प्रगतिशील महत्त्वपूर्ण रूपमा परिणत गर्दछ, उनीहरूको प्रविधिले उनीहरूको ढाँचामा परिवर्तन, दायित्व, संगठनात्मक ढाँचा, र त्यसमा पुनःप्राप्त गर्न बाध्य पार्दछ। नतीजा, यो निरन्तरता आईटी संगठनको कुञ्जी कुशलताहरूको उपलब्धता निर्धारण गर्न निरन्तर धक्का चाहिन्छ। जब एक संगठनले यो प्रगति कौशल आईटी कौशल प्रणालीमा सुचारु गरेको छ, हालैको लगानी धेरै नै बनाइएको छ।
आईटी संस्थाहरूले ग्यारेण्टीको महत्वपूर्ण दिशालाई बलियो बनाउनका लागि उनीहरूको सही समयमा सही कुञ्जीहरू ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। आईटी सिभिल प्रणालीको कन्फिगरेसन आईटी संस्थाहरूको लागि मौका प्रदान गर्दछ जुन उनीहरुको स्तरको स्तर निर्धारण गर्नका लागी कौशल कलेजहरू अवस्थित छ र संरचनाको निर्माण गरेर तिनीहरूको स्तर निर्धारण गर्न निर्णय गर्दछ। नवाचार जस्तै, आईटी सिजन प्रणाली राख्ने व्यवसायलाई केहि प्रोत्साहन प्रदान गरिरहँदा जारी राख्दा यो एकपटक फेरि एक विस्तार कौशल सिर्जना गर्न योगदान हुनेछ।
प्रोजेक्ट टोली सफलताको प्रोजेक्ट कसरी प्रयोग गर्ने
एक तीव्र वातावरण - साँचो गतिशीलता प्राप्त गर्न को लागी